Mareykankii xooga weynaa oo gargaar Turkiga iyo caalamka kale weydiistay. - NorSom News
Mareykankii xooga weynaa oo gargaar Turkiga iyo caalamka kale weydiistay.
Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal, halkan riix, kadibna Subcribe(Abonner).
Mareykanka ayaa rabo in laga caawiyo qalab ay ka mid yihiin mashiinka neefta ka caawiya dadka uu naqaska ku dhago, dawada gacmaha lagu nadiifiyo, maryaha sanka iyo afka lagu xirto, qalabka wajiga lagu xirto, dharka qafilan ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha ay xirtaan iyo kuwa kale oo badan oo gacan ka geysan kara wax ka qabashada xanuunka.
Previous articleFrp oo maanta dabaaldeg weyn sameeyay, arintan darteed.
Next articleBooliska Oslo: Dad badan oo soomaali ah ayuu Corona-virus ku dhacay, qaarna isbitaal ayay u jiifaan.